Toddobaad cusub, warar xan cusub. Toddobaadkan waxaan u laabannay warbixin xanta cusub ee sii socota ee ku wareegsan iPhone 7 iyo moodooyinka dambe. IPhone 7s ayaa isticmaali kara xeedho indho-indheyn ah sida Apple Watch ama xeedho wireless, laakiin runtii wireless, saldhigyo lacag la'aan ah sida Apple Watch. Mid ka mid ah iibiyeyaasha sameeya sameecadaha sameecadaha iPhone-ka ayaa sheegaya in sameecadaha soo socda ee la iman doona iPhone 7 ay yeelan doonaan a jabka baajinta dhawaaqa. Laakiin sidoo kale nooca Plus waxay lahaan laheyd laba kamaradood iyo indho indheyn, sidaa darteed waxaa jiri lahaa dhowr nooc oo iPhone 7 Plus ah, ma ahan oo keliya mid illaa hadda socda, iyada oo aan la tixgelinaynin awoodaha kala duwan.
Dhowr toddobaad oo xan ah kadib, iPhone 6c waxaa loogu yeeri doonaa iPhone 5se, ugu yaraan sida ku xusan wararkii ugu dambeeyay. Saaxiibkeen Pablo, ayaa daabacay qoraal uu ku qoray kala duwanaanshaha ugu weyn ee iPhone 5 maxaa raaci lahaa garaacista suuqa leh nimcada 16 GB taas oo aan noo oggolaanaynin inaannu ficil ahaan waxba qabanno. Adoo diyaarinaya labada shaashadood oo 4-inji ah, labada moodelba waxay ahaan lahaayeen kuwo isku mid ah cabir ahaan, laakiin qaabka cusubi wuxuu lahaan lahaa geeso wareegsan oo dhinacyo badan leh.
Toddobaadkan Safari, noocyadiisa loogu talagalay iOS iyo OS X ayaa dhib soo gaadhay dhibaato yar oo weyn oo sababtay in arjiga la xiro sabab la'aan. Xalku wuxuu ahaa mid fudud laakiin waxay u horseedday isticmaaleyaal badan rogrogmadaan. Tan iyo markii aan ka hadlayno OS X, shaqada cusub ee Habeenkii Shift ama Habaynta Habeenkii ee iOS 9.3 waxaan sidoo kale ku hawlgelin karnaa f.lux-ka Mac-ga, qodobkaan waxaan ku tusaynaa sida loo sameeyo.
Toddobaadkan in qaybta casharrada waan ku tusnay sida loo isticmaalo Siri si aad u daarto oo aad u demiso, sida aan u tusi karno ama u qarin karno barnaamijka iCloud iyo sida ku hagaaji iPhone-keena si aan uga faa iideysano batterigayaga. Inta aan sugeyno koox burcad ah inay naftooda u huraan oo noo soo bandhigaan Jailbreak loogu talagalay iOS 9.2 ama 9.3, ee ku saabsan iPhone News waxaan ka soo hadalnay tweak oo noo ogolaanaya inaan ku miisaanno walxaha iPhone-ka, aan ka ahayn wuxuu noo ogolaanayaa inaan ka baarno shaashad kasta oo ka mid ah taleefannada iPhone-ka marka lagu daro dib u habeyn noo ogolaaneysa u isticmaal iPhone-gii hore ama Ipad-ka sidii af-hayeen AirPlay ah.
Tijaabooyinka Google ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee qoraxda oo bixiya isku xirnaanta 5G
Daadinta: Sawiradani waxay tilmaamayaan in iPad-ka Air 3 ee soo socda uu yeelan karo Smart Connector iyo inbadan